ဒေါ်စုရဲ့ အောင်ပန်း-ကလော-ဟဲဟိုးခရီးစဉ်မှာ နှုတ်ဆက်ကြိုဆိုတဲ့ တပ်မတော်သားလေး ကျော်ဇင်ဝင်းတစ်ယောက် ထိုးကြိတ်ခံရပြီး တပ်ချုပ်ချထားခံရပါတယ်တဲ့။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဒေါ်စုရဲ့ အောင်ပန်း-ကလော-ဟဲဟိုးခရီးစဉ်မှာ နှုတ်ဆက်ကြိုဆိုတဲ့ တပ်မတော်သားလေး ကျော်ဇင်ဝင်းတစ်ယောက် ထိုးကြိတ်ခံရပြီး တပ်ချုပ်ချထားခံရပါတယ်တဲ့။
ဒေါ်စုရဲ့ အောင်ပန်း-ကလော-ဟဲဟိုးခရီးစဉ်မှာ နှုတ်ဆက်ကြိုဆိုတဲ့ တပ်မတော်သားလေး ကျော်ဇင်ဝင်းတစ်ယောက် ထိုးကြိတ်ခံရပြီး တပ်ချုပ်ချထားခံရပါတယ်တဲ့။
Posted by chityimhtoo on Mar 4, 2012 in News | 15 comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ကလောမြို့နယ်ခရီးစဉ်တွင်တပ်မတော်သားတစ်ဦးမှ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပုံကို NLD ပါတီထုတ်စာစောင်ဖြစ်သည့် ဒီလှိုင်းဂျာနယ် (ယခုအပတ်ထုတ်) တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းတပ်မတော်သားမှာ ကလောမြို့ တပ်မ (၅၅) မှ တပ်သားကျော်ဇင်ဝင်းဆိုသူဖြစ်ကြောင်း ကလောမြို့ခံများထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဒေါ်စုရဲ့ အောင်ပန်း-ကလော-ဟဲဟိုးခရီးစဉ်မှာ နှုတ်ဆက်ကြိုဆိုတဲ့ တပ်မတော်သားလေး ကျော်ဇင်ဝင်းတစ်ယောက် ထိုးကြိတ်ခံရပြီး တပ်ချုပ်ချထားခံရပါတယ်တဲ့။ ဒီတပ်မတော်သားလေးနာမည်..တပ်သားကျော်ဇင်ဝင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်.. အောင်ပန်းGE…တပ်မှဖြစ်ပါတယ်..သူအခုအထိုးအကျိတ်ခံရပီးလူရုပ်မပေါ်တော့ ပါဘူး…. ကွာတား(တပ်အချုပ်ချခံထားရတယ်) ဒီသတင်းလေးကိုshareပေးကြပါ.. တိတိကျကျသိလိုပါကဖုန်း0949353386.ကိုဖိုးချိုထံမေးနိင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးဘဲ chityimhtoo ရေ
ဒီဓါတ်ပုံက ကိုကျော်ဇင်ဝင်းသေချာတယ်ဆိုရင် အမေစုလဲသိနေရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့မှာ။
သူလဲ သူ့ ခံစားချက်နဲ့ သွားရောက်တွေ့ ဆုံတာဘဲဗျာ။ဒီအာဏာရူးစစ်ခွေးကြီးတွေကြောင့် စိတ်
စစ်သားတစ်ယောက်က အမေစုကို နူတ်ဆက်တာ အဲဒီလောက်ထိအပြစ်ကြီးသလား
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာနှိင်ငံမှာ ဒါ ပထမဆုံး မြင်ကွင်းလို့ထင်တယ်..
ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်ချက် ခံစားချက်ကို ရဲဝင့်စွာဖေါ်ပြရဲတဲ့ မင်းလိုသတ္တိမျိုး စိတ်ဓါတ်မျိုး သာ တပ်မတော်ထဲမှာ လေးပုံ တစ်ပုံလောက်ပဲ ရှိပါစေ ဒီနေ့တို့တိုင်းပြည် ဒီလိုတောင် မဖြစ်ဘူး..
ခင်ဗျား သတ္တိကို လေးစားတယ်ဗျာ …ခင်ဗျားဘာကြုံမယ်ဆိုတာ သိထားလျက်နဲ့
ဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်တာ …နောက်ပြီး …ခင်ဗျားနောင်တ မရဘူးဆိုတာ …ယုံကြည်ရဲ့ …..
အဲ့သည့်လူ ကို ဗျူးမယ်ဆိုပြီး ခေါ်ထုတ်ခိုင်းဗျာ ….
သူဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ယခု ဘယ်လိုဖြစ်နေ တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိရအောင်…
ဒီသဒင်းနဲ့ ခညား မိန့်ခွန်း …
တွဲမစားသင့်တဲ့ စာရင်းထဲ ထည့်လိုက်ရမား ..ဘဂျီး…..
မီဒီယာ ကားဗားရေ့ခ်ျ ဖြစ်အောင် လုပ်ပါဦးဗျို့ ….
ဒီသတင်းကို မျက်ခြေမပြတ်ကြပါနဲ့ဗျို့… ရသလောက် စုံစမ်းပြီး ပုံမှန်တင်ပေးဂျပါ။ စစ်သားလေးအတွက် သူ့ခြေဖျားလောက်မှ သတ္တိမရှိတဲ့ ကျုပ်တို့တတွေ ဒီလောက်တောက် အားစိုက်ပေးသင့်တယ်.။။ သဂျီးရေ သဂျီးရဲ့ ပြောင်းနေဘီဆိုဗျ….။
အပေါ်က ကိုရင်ဂီ ပြောတဲ့အချက်များ အားလုံး လျောက်ပတ်ပါသည်။
ကိုချစ်ရင်ထူးရေ ကျနော်လဲဒီ ရွာထဲမှာတင်ထားသေးတယ်။အဲဒီသူပေးတဲ့ ဖုန်းကိုခေါ်
ကြည့်တာ ခေါ်လို့ မရဘူးနော်။မဟုတ်ဘူးလို့ လဲသတင်းပြန်ထွက်နေတယ်။ရန်တိုက်
ဖေ့စ်ဘွခ်တွေထဲ .. မေးလ်ဂရုတွေထဲ …ပလူပျံနေတဲ့ … ဒီသတင်းနဲ့ .. ဒီပုံလေးမြင်မိပြီး .. စာနာစိတ်ဖြစ်မိတယ် … ။ လူသား တစ်ယောက် … ကိုယ်ပိုင် စိတ်ခံစားချက်အရ … ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ .. ကြိုဆို နှုတ်ဆက်တာ .. အဲ့ဒီလောက် အပြစ်ကြီးဖြစ်သွားရောတဲ့လား … ။ ယူနီဖောင်းဝတ်ထားလို့ … တာဝန်ချိန်မှာ ၀တ္တရား လစ်ဟင်းမှုနဲ့ … အရေးယူမယ်လို့ ထင်ပါတယ် …. ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကတပ်မတော်ရဲ့ ဖခင် ဒီတော့
အမေစုက တပ်မတော်နဲ့ မောင်နှမ တော်မှာပေါ့နော်
ကိုယ့်ရဲ့ နှမသားချင်းတစ်ယောက် ကိုကြိုဆိုတာ အပြစ်လားဗျာ
ကြည့်လို.အရမ်းကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးပါဗျာ.. တကယ်လဲ ကြည်နူးဖို.ကောင်းပါတယ်…
ကျန်တဲ့စစ်သားတွေရော ကိုကျော်ဇင်ဝင်း လို နှုတ်ဆက်ချင်ကြမှာပါပဲ.. ဒါပေမယ့် သူလို သတ္တိ မရှိကြတော့လဲ ငြိမ်နေရမှာပေါ့…
ဘာမှ မသိတဲ့အတွက် ဘာမှပြောစရာမရှိပေမယ့်………..
အဲလို ကိုကျော်ဇင်ဝင်း လို နှုတ်ဆက်တဲ့သူ တွေ အများကြီးရှိလာရင် ကောင်းမှာပဲဗျာ……… နော်
စစ်သားတွေထဲမှာ အမေစုကို နှုတ်ဆက်ချင်သူတွေက အများကြီးဗျ။ အဲ့ဒီနေ့က အမေစုသွားတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်နဲ့ မြို့တွေမှာ ရှိတဲ့စစ်တပ်တွေကို အပြင်ထွက်ခွင့်မပေးတာက ကလောကလူတွေ အားလုံး အသိပါ။ ကလောမှာ မြင်နေကျ စစ်ယူနီဖောင်းနဲ့သူတွေ အဲ့ဒီနေ့က လုံးဝကိုမတွေ့ရဘူး။ အမေစုမလာခင်တစ်ရက်က ကျွန်တော်တို့ ဖိတ်စာတွေ အလံတွေ ဝေတယ်။ ကျွန်တော်က သတ်သတ်မဲ့ကို ဈေးလာဝယ်တဲ့ စစ်သားတွေကို လိုက်ဝေတယ်။ သူတို့အားလုံးက ပြန်ပြောတယ်…. ညီလေးတဲ့ အကိုတို့ယူသွားရင် ဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။ ဒါက တရားသော ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။
စစ်သားလေး အမေစုကို လာနှုတ်ဆက်တော့ အဲ့ဒီရှေ့နားမှာ ကျွန်တော်ရှိတယ်။ သူပြောသွားတာက အမေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဧရာဝတီဖက်ကို ပြောင်းရတော့မှာ ……. ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း ပစ်မထားပါနဲ့တဲ့ ။ အခုကျတော့ အဲ့ဒီစစ်သားကပဲ အတုလိုလို တစ်ကယ်ပဲမရှိသလိုလို ပြောနေကြတယ်။ တပ်မကြီးတစ်ခုကနေ စစ်သားလေးတစ်ယောက်ကို ဖြောက်ပစ်ရတာ လွယ်ကူမယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပါတယ်။
Kyaw Swar Myint Freedom News Group(Burma)
တပ် မတော် သား ကို မှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို သွားကြိူ မှုနဲ့ အရေးယူ ထား တာ
တပ်မ ၅၅ တပ်ရင်းမှုး ကိုယ်စား တပ်ရေး ဗိုလ်ကြီး မှ FNG နှင့် တယ်လီဖုန်းဆက် သွယ် ပြောကြား ချက် —————– (တပ်က ပြန်ဖြေတဲ့သတင်းပါ )
ဟား…..ဟား…..ဟား…..ဟား…..ဟား……….မုဆိုးမတစ်ယောက်ရဲ့ ထမိန်ခတ်သံကို ဒီလောက်တောင်ကြောက်နေကြရင်လည်း ဝင်ပြီးမပြိုင်ကြနဲ့လေ…………..( ဒင်းတို့ကိုပြောချင်လို့ …… ကန်တော့ပါအမေစု )
ဒီပုံလေး ကို မြင်တော့ စိတ်ထဲ တမျိုးကြီးပဲ တစ်ခုခု ကိုခံစားရသလို နင့်ခနဲ နဲ…။ သူ့ အတွက် အဆင်ပြေဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်..။
ကျွန်မ သိတဲ့ စစ်သား တချို့ပေါ့ (အရာရှိတွေ) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်း ကို စလိုက်တယ်ဆိုရင် ပဲ တချိုဆိုရင် သိသိသာသာ ကြီးကို စကားလမ်ကြောင်းလွဲ ပြီး အပြောမခံဘူး.. တချိုဆို့ .. ရန်တောင်တွေ့တယ်.. တချို့ဆို လုံးဝ ကို စကားပြန်မပြောဘူ…။ အဲလို မျိုးကို ကြုံဖူးတာ..။ သူတို့ စစ်တက္ကသိုလ်တွေ မှာ ဘယ်လောက်တောင် များ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မုန်းတီးရေး စိတ်ဓါတ်တွေ ရိုက်သွင်းခံထား၇လဲတော့ မပြောတတ်ဘူး..။
ဒီပုံလေးကိုမြင်ရတော့ တပ်သားလေးကို လေးစားမိတယ် သူ့ထက်ရာထူးကြီး အသက်ကြီးပြီး အချိန်မစီးတဲ့သူတွေ လူကြီးတွေ သံဝေဂရသင့်နေပြီ
စကားမစပ် ဒီသတင်းကိုဘာ့ကြောင်း ခြေမနေနိုင်လက်မနေနိုင်လိုက် နီ ပေးနေသလဲဆိုတာလည်း မေးချင်ပါတယ် အပြင်ထွက်ပြီး ပေါ်တင်ပြောပါ လက်ယားနေရင်တော့ xxxxxxx ပဲဗျာ